ပရိတ်သတ်တွေ ကြား ဝေဖန်မူ တွေ ဖြစ်ပေါ် နေ တဲ့ အိပ်ယာ ပေါ်မှာ ပက်လက် လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပရိတ်သတ်တွေ ကြား ဝေဖန်မူ တွေ ဖြစ်ပေါ် နေ တဲ့ အိပ်ယာ ပေါ်မှာ ပက်လက် လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
ပရိတ်သတ်တွေ ကြား ဝေဖန်မူ တွေ ဖြစ်ပေါ် နေ တဲ့ အိပ်ယာ ပေါ်မှာ ပက်လက် လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးစိန်လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ဖွေးဖွေး ကတော့ အကယ်ဒမီ ၃ ဆု ရရှိထားပြီး အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလ မှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို ရပ်နားထားရတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်များကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ မင်းသမီးတဦး ဖြစ်ပေမဲ့လည်း သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း ပရိတ်သတ်ကို ပြသလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီးတဦးလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက် အတိုင်း သဘာဝဆန်ဆန် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေသူတွေကို အခုလိုပဲ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖွေးဖွေး ပြောခဲ့တာကတော့ ” တသက်လုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ကျွေးလာတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် စိတ် အတွေးလေး နဲ့ ပင်ပန်းလို့ ခဏ
လှဲအိပ်မိတာ မှာ ဘာ တွေ တွေးနေ ကြတာလဲရှင်….?
တကယ် ကြေကွဲနေတဲ့ချိန်မျိုးဆို ဒီထက်ဆိုး ပါတယ်..အမှန် ကို ကိုယ့်ကိုယ်လဲမြင်ကြပါရှင်…This is Art..” ဆိုကာ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ ပက်လက်လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အတွေးတွေ မလွန်စေဖို့ နဲ့ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံဟာ အနုပညာတခုသာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
ႏိုင္ငံေက်ာ္ မင္းသမီးတဦးျဖစ္တဲ့ ေဖြးစိန္လို႔ အားလုံးက ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ ေခၚၾကတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေဖြးေဖြး ကေတာ့ အကယ္ဒမီ ၃ ဆု ရရွိထားၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ မင္းသမီးတဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူပါ။ အခုလို ကိုဗစ္ကာလမွာေတာ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္နားထားရတာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ားကိုလည္း ပရိတ္သတ္ေတြကို ေျပာျပေလ့ရွိသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖြးေဖြးကေတာ့ မင္းသမီးတဦးျဖစ္ေပမဲ့လည္း သူမရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္အတိုင္း ပရိတ္သတ္ကို ျပသေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္နဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ေနတဲ့ မင္းသမီးတဦးလို႔လည္း ဆိုရမွာပါ။
လက္ရွိမွာေတာ့ သူမရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္အတိုင္း သဘာဝဆန္ဆန္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကို ေဝဖန္ေျပာဆိုေနသူေတြကို အခုလိုပဲ တုန႔္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေဖြးေဖြး ေျပာခဲ့တာကေတာ့ ” တသက္လုံး ကိုယ့္ကိုယ္ကို လုပ္ေကြၽးလာတဲ့ မိန္းကေလး တေယာက္ စိတ္ အေတြးေလး နဲ႔ ပင္ပန္းလို႔ ခဏ လွဲအိပ္မိတာ မွာ ဘာ ေတြ ေတြးေနၾကတာလဲရွင္….?
တကယ္ ေၾကကြဲေနတဲ့ခ်ိန္မ်ိဳးဆို ဒီထက္ဆိုးပါတယ္..အမွန္ ကို ကိုယ့္ကိုယ္လဲျမင္ၾကပါရွင္…This is Art..” ဆိုကာ ေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ယာထဲမွာ ပက္လက္လွန္ကာ လွဲေလွာင္းေနတဲ့ သူမရဲ႕ ပုံရိပ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အေတြးေတြ မလြန္ေစဖို႔နဲ႔ အဆိုပါ ဓာတ္ပုံဟာ အႏုပညာတခုသာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ရွင္းျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္။
Previous post အမိုက်စား ဝတ်စုံလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှလေး ကပေါ်လွင်နေကာ ဆယ်ကျော် သက်လေး လို နုပျို လှပနေ တဲ့ အိချောပို
Next post ရိုးရိုး ယဉ်လေး ဝတ်ဆင်ကာ တောပန်းလေးတွေ နဲ့ အတူလှပနေတဲ့ မေပန်ချီ ရဲ့ ဗီဒီယို